Article submitted by: Thunderbolts on 29-Nov-2013
မအေးရယ် ချစ်လိုပါကွယ် ။
မစုကြည် အခု နောက်ဆုံး သြစတွေလယား ခရီးစဉ်မှာ ပြောတဲ့ စကားလေး အတိအကျ ပြန် ဖေါ်ပြရ ရင်(''စစ်တပ်ကို ကျွန်မဘယ်တော့မှ မမုန်းပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်မ အဖေဟာ စစ်တပ်ကို တည် ထောင်ခဲ့သူပါ။ ကျွန်မ အဖေဟာ စစ်တပ်ရဲ့ ဖခင်ပါပဲ။ ကျွန်မစစ်တပ်ကို ကြည့်တိုင်း ယူနီဖောင်းနဲ့ ကျွန်မ အဖေကို မြင်မိတဲ့အတွက် စစ်တပ်ကို ကျွန်မ မုန်းလို့ မရ ပါဘူး။ တကယ်တမ်းဆိုရင် သူတို့လည်း ကျွန်မကို ချစ်သင့်ပါတယ်'' လို.ရယ်မောပြီး ပြောသွားသတဲ့ ။) တဲ့ ( ခန်းကိုချစ်ရင် ပဲပုတ်ကိုလဲ ချစ်ရမယ် အကို ) ဆိုသလို ကျမ ဖေဖေ ကိုချစ်ရင် ကျမကိုလဲ ချစ်ရမယ် ဆိုတဲ့သဘောဘဲ တဲ့ ။ ကျမ ကလဲ တပ်မတော် ကို ချစ်ပါတယ် တဲ့၊ အခုသူကို ၀ိုင်းချစ်နေကြသူ တွေ ဟာ သူကချစ် တဲ့ သူတွေဘဲ ပေါ့ ဟုတ်လား ။
မုန်းလဲ ဂရုစိုက်စရာမလိုပါဘူး။ စစ်တပ်ဟာ ပြည်သူတရပ်လုံးအတွက်ပါ။ စစ်တပ်ဆိုတာ မုန်းတဲ့ လူရှိမယ် ချစ်တဲ့ သူရှိမယ်။ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးကို ပြည်တွင်း ပြည်ပ ရန်တို.မှ ကာကွယ်ရာ မှာ စစ်တပ်ဟာ လုပ်သင့် တာကို လုပ်ရမယ် ၊ ပစ်ဘို. အကြောင်း လုံလောက် ရင် ပစ်ရမယ် ၊ တချို.ချို.သော စစ်တပ်တွေဟာ နိ်ုင်ငံတကာလှည့်ပြီး တွေသမျှ လူတွေကို ပစ်သတ်နေတာ ။ မြန်မာတပ်မတော်ဟာ သူနိုင်ငံတော် (အမျိုးသား) လုံခြုံရေးနဲ့ ပါတ်သက် လာရင်. ဘယ်သူကိုမှ ဒူးထောက်ရှိခိုး နေစရာမလိုဘူး။
အသေးတော့ မစိပ် လိုတောပါဘူး မြန်မာနိုင်ငံ ကိူပြန်ရောက်လာတဲ့ ၁၉၈၈ ခုအချိန်ကစပြီး နယ်အနှံ.သွား သူပြောခြင်တာတွေ ပြောခဲ့တဲ့ မိန်းမ မစုကြည် မှာ အကျင်.ဆိုးတခုရှိတယ် ၊ မြန်မာစကားမှာ တော့ ‘ ထောင်တန်တဲ့စကား ရယ်ရင် ပေါ့တယ်’ တဲ့ ၊ ဆိုလိုတာက တန်ဘိုး ရှိတဲ့ စကားကို ရယ်ရွှင်ဖွယ် ဟာသလုံး လုပ်လိုက်ရင် တန်းဘိုး မရှိဘူးဆိုတာဘဲ. မြစ်ဝ ကျွန်းပေါ်မြို.တမြို. မှာဆိုလား အင်္ဂလိပ်ကို ဘာကြောင့် ယူရတာလဲလို. အဖွားအို တယောက်ကမေးတော့ ပေါ့ပေါ့တန်တန် သူဖြေခဲ့တယ် ၊ ဒါဟာ လူဖြစ် တဲ့ ကျမရဲ အခွင့် အရေး ကျမရဲ့လွပ်လပ်ခွင့် ၊ ဂျီးဒေါ်အလုပ် မဟုတ်ဘူး လို. ဘာကြောင့် မဖြေခဲ့ပါ လိမ့်။
ပြီးခဲ့တဲ့အပိုင်းက ၁၅- ၀၁-၁၉၈၉ က ကျုံမငေးမှာ ပြောခဲ့တုန်းက ( ကျမတို ဒီမိုကရေစီ တိုက်ပွဲမှာ ပါဝင် လာကြတာဟာ အာဏာလိုခြင်လို.ပါဝင်လာကြ တာမဟုတ်ပါဘူး) တဲ့. တခြားလူတွေ အာဏာလိုခြင်လို မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ဟုတ်ခြင်ဟုတ်မယ်။ သူကရော အပျော် ထမ်း အပြင်းပြေ ၀င်ရှုတ်တာတဲ့ လား။ အခုတလောပြောတဲ့ စကားတွေနဲ့ နိုင်းယှဉ် ကြည့်နိုင် တယ်။
အိမ်ထဲနေခဲ့ရတဲ့ နှစ်တွေ နှုတ်လိုက်ရင် အပြင်းမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြောခဲတဲ့ စကားတွေ နှိုင်းကြည်ရင် ကွဲလွဲ ချက်တွေ အများကြီးတွေရမယ် အဲဒါ နိုင်ငံရေးသမား ရဲ့ အမူအကျင့် ဘဲ လို သတ္တူချလိုက်ပါတော့။
၂၀၁၅ ခု ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီ အခြေခံ ဥပဒေက်ိုပြင်ဆင်စေခြင်တာ တခြားကစ္စတွေထက် သူ သမတ ဖြစ်ဘို. အထိကဘဲ. အမေရိကန်ပြည် ထောင်စု မှာလို သမတကို လူထုက တိုက် ရိုက်ရွေးကောက် တဲ့ စံနစ်နဲ့မှ သူသေချာပေါက် စားသာမယ်လို.ထင်နေတယ် ၊ သမတကို ပါလီမန်က ရွေးရမယ် ဆိုရင် သူ မသေချာဘူး။ ကြည်.လေ လက်ရှီ ၂၀၀၈ ဖွဲစည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေဟာ သူ.ကို သမတ မဖြစ်နိုင်အောင် တမင်ရည်ရွယ်ရေးစွဲ ထားတာလို. လုံးဝ စွဲမြဲစွာ ယုံ ကြည်နေတယ်၊ သူလိုလူ ဇဗ္ပူမှာတယောက်ထဲ ရှိတယ်လို.အထင်ရောက်နေ တယ်။ ဘုရားဟော အတိုင်းပြောရရင်. သူဟာ ပုထုဇဉ်မို. ဥမ္မတဂေါ ဘဲပေါ့.
လက်ရှိပါလီမန်ထဲက တပ်မတော်သားကိုယ်စားလယ်တွေ ၊ နောင် ပါဝင် လာမဲ့ အလား အလာ ရှိ တပ်မတော် ကိုယ်စားလည်တွေကို မခို.တယုံ.နဲ့ အကို. အကို လို. ကိုယ်အမူ အယာ နှုတ်အမူအယာတွေနဲ မြူဆွယ်နေ တယ်လို.ဘဲ ပြောရလိမ့် မယ် ၊
အခုတော့ ချစ်ရမဲ့သူ မရှိတော့ဘူးထင်တယ် နော်။ သူကို ချစ်တဲ့ လူတွေ မမုန်းသည်တိုင် လျှောလြာ့ပီ ဆိုတာ သတိထားမိပုံ.ရှိတယ် ။ အရင်ကတော့ အာဏာလိုခြင်လို. မဟုတ်ပါဘူး တဲ့။ အခုတော့ အာဏာ လိုခြင်နေပြန်တယ် သမတဖြစ်ခြင်နေတာ ဟန်တောင်မဆောင် နိုင်လောက်အောင်ဘဲ ချစ်ပါ တယ် မေတ္တာထားပါတယ် ဆိုလာတဲ့ သူကို ဘယ်လို အပစ် မြင်နိ်ုင်ပါ့မလဲ ၊ နင်ချစ်တာ ငါ သိပါတယ် လို. ဘဲ ပြောရတော့မှာပေါ့၊ ဒီ ချစ်စိတ်တွေ ဘယ်က ၀င်လာသလဲ ။ အော် တတ်လဲ တတ်နိုင်ပါပေရဲ့ ။ သူ.ကိုယ် သူတောင် အာမ မခံ တာဝန်မယူ နိုင်တဲ့ သူက တခြားသူတွေကို ဘယ်လို အာမခံ တာဝန်ယူ မှာလဲ ။
အမှိုက် တံမြက်စည်းလှဲ ပြီှး ဖျာ အောက် သွင်း မလုပ်ပါ ။ ဘယ်နဲ့ စော်ကား လှချည်လား ဗျာ ။ မြန်မာတွေ ဟာ ခင်ဗျား ထင်သဘောက် ငတုံးတွေ ငကန်းတွေ ငပင်းတွေ မဟုတ်ကြ ပါဘူး။ မျက်စေ့ဖွင့် နားစွင့်နေကြ သူတွေ ရှိပါတယ် ထောက် ပြခြင်တာက ဖေဖေနဲ့ကျမ က တခြားစီဘဲ ဆိုတာ ကိုယ်တိုင် မသိဘူးလား?
ပြေညရရင် ကျမ ဖေဖေက အင်္ဂလိပ် ကို တော်လှန်ခဲ့တာ ၊ ကျမ က အင်္ဂလိပ်ကို လင်လုပ်ပြီး ၊ အင်္ဂလိပ် လုပ်သမျှ ခံခဲ့တာပါ လို. ပြောသူတွေက ပြောကြရင် ဘာဖြေ မလဲ ? နောက်ထပ်ဘယ်လောက်ခံဘို. ရည်ရွယ်ထား သလဲ - မသေမချင်းဘဲ လား ? ဒါတောင် ဟိုတယောက်( Michael Aris) က စောစောစီ:စီး ဘ၀ တပါးြေ့ပာင်းသွားလို.သာပေါ့။ Autopsy မှာ Michael ဟာ ပဌမ အသဲကွဲ ပြီး အသူဘ သူမလာတော့ အသဲကျွမ်း သွားတယ် လို.သိရတယ် ။ အများကြားကောင်းအောင် န၀တ အပေါ်ဘဲ အားလုံး ပုံချလိုက် တယ်။
ခင်ဗျားသေရင် ကော ဘယ်သူတွေက ဆက်ခံရအုံးမှာလဲ ? အောင်ဆန်းအမည်ခံ သားတွေ မြေးတွေ မြစ်တွေ အတွက်ပါ သေချာပေါက် လုပ်ခြင်နေသလား - ဖွဲ.စည်းပုံ အခြခံ ဥပဒေ သစ်မှာ သူတို.ဆက်ခံဘို. ကိုပါ ထည့်သွင်းရေးစွဲမလို.လား ?
အင်္ဂလိပ်ကို လင်တော်လို. အင်္ဂလန်မှာနေလို. မြန်မာတွေ အပေါ် အချစ်မပေါ့ ပါဘူးတဲ့ လား ၊ အင်း ဟုတ်ပါလိမ့်မယ် ။ အားမနာတန်းပြောရရင် တချိန်က မြန်မာပြည်နဲ့ မြန်မာတွေကို ဖုတ်တဲ့ ငါးပိ ရှိတယ် လိုတောင် မမှတ်သူ။ ခလေး ၂ ယောက်နဲ့ လင်ကိုပစ်ပြီး မှီရာ လှည်း ပေါ် ခုန်တက်ခဲ့ သူက မြန်မာပြည်နဲ့ မြန်မာတွေကို ဘယ် တုန်းက စချစ်ခဲ့တာလဲ ? နောက် လှည်း တစင်း စောင့်နေ သလား ၊
လင့် အပေါ်ရော တိုင်ြ့ပည် နဲ့ လူမျိုးအပေါ်ရော ချစ်မေတ္တာတွေ တဖွားဖွား ပေါ်လာတာလား အောင်သွယ် ကောင်း လို.လား ။ ဘယ်တုန်းက စပြီး ဘယ်အချိန်က စပြီး မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ မြန်မာတွေကိုချစ် လာတာလဲ ၊ မိထွေုး ပထွေးတို.ရဲ. Arrange marriage (မိဘပေးစားလို. ချစ်လိုက်ရတာလား) မြန်မာတွေနဲ့ မြန်မာပြည်အကြောင်း မသိခြင်ပါဘူးလို ပြောခဲ့ တာကို မျက် မြင်သက်သေတွေ နားကြားသက်သေတွေက အမုန်းမခံခြင်လို. ရှေ.ထွက် လာ မပြောဘဲ ဥပက္ခာပြု ခဲ့ကြတယ် ။ ဒါဟာ မြန်မာမှုဘဲ လား။ ဒါတွေဟာ အသေးအဖွဲ တွေ တဲ့လား Habitual ဆိုတဲ့ မဖျောက်နိုင်တဲ့ ဥာဉ် ဒီလို သောက်ကျင့် မျိုး ရှိသူဟာ ဗီဇ ပါလို.ဘဲ။ အဖေ.သမီး ပီသပါပေတယ် ။ အဖေလဲ တနည်းလေးစားပေမဲ့အားမနာတန်းပြောရရင် နှီးရာပေါင် ပြေးကပ်ခဲ့ တာ ဘဲ မဟုတ်လား။
တဆက်ထဲဘဲ ပြောရအုန်းမယ် မြန်မာတတွေ နားလည်ကြတဲ့ တော်လှန်ရေး ဆိုတာ ဂျပန်လာမှ စခဲ့တာ မဟုတ် ၊ အင်္ဂလိပ် အုပ်ချုပ်မှု တလျှောက် ခင်ဗျား အဖေ မမွေးခင် ကတည်းက နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ တော်လှန်နေခဲ့ ကြသူတွေ အကုန် စာရင်း သွင်းရရင် စာရင်း စာအုပ်တောင် မလောက်ဘူး။
ကိုအောင်ဆန်းဟာ မြန်မာလွတ်လပ်ရေးကြိုပန်းကြတဲ့ အာဇာနည်တွေထဲ က တယောက်သာ ဘဲ ဖြစ်တယ် ဆိုတာ လက်ခံရင်ခံ မခံရင် လဲသာ သေလိုက် ကြ ၊ ဒါဟာ အမှန်ဘဲ Facts are facts, they are not legends. ကိုအောင်ဆန်း ကိုယ်တိုင် ဂျပန်တွေကို ခေါ်လာတာ ပါ ၊ လူပေါင်းမှားခဲ့တာပါ ဆိုရင်လဲ သူဟာနဲ့ သူခံရတာဘဲ့ လို.ပြောရင် မှန်သောစကားမို လက်ခံရ မှာ ဘဲ ။
ချီးကြူးရမဲ့ အပိုင်းကို သူ.ကို ချီူကျုးဂုဏ်ပြုနေဆဲမှာ ဘဲ သူ.မတိုင်ခင်က အင်္ဂလိပ်ကို တော်လှန် ခဲ့ကြသူတွေ ဂျပန်ကို သူနည်းသူဟန်နဲ့ တော်လှန်ရေး သမား အသီးသီးကို သတိရစေလိုတယ် လေးစားစေလိုတယ် သူတိုကိုတော့ မစော်ကားပါနဲ.၊ ၀ဋ် ဆိုတာ လိုက်တတ်ပါတယ် လို. ဗုဓ္ဒဘာသာပီပီပြော လိုက် ခြင်တယ် ။
ကျမဖေဖေ အောင်ဆန်း နာမယ် မပါရင် ကျမ အသက် ရှင်နိုင်မယ် မဟုတ် ပါဘူး။ ကျမကို ဘယ်သူမှ မသိပါဘူး။ အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုလို.လဲ ၊ လေယဉ်နဲ့ ရောက်လာတာမှန်ပေမဲ့ မိုးကျရွှေကိုယ် သန္ဒေသူ လေး မဟုတ် ပါဘူး။ လူရဲ သဘာဝ ကိုက တယောက်ကို တယောက် အသုံးချနေကြတာဘဲ ။ ကိုယ့်ကို ဘယ်သူတွေက ဘယ်လို အသုံးချနေတယ် ရော ရိတ်မိရဲ.လား ။
မြန်မာတွေ မှာ ပေါ်တော် မူ ဆိုတဲ့ မတော် တဆ မြေကြီးထဲက တူးဖေါ်လို. ဖြစ်စေ ကောက်ရတဲ့ ရုပ်တုတွေ ကို တန်ခိုးကြီး ဘု၇ားအဖြစ်နဲ့ ကိုးကွယ်ကြ တဲ့ အကျင့် တချို.မှာ ရှိကြတယ် ၊ NLD တွေ အများဆုံးဘဲ ထင်တယ်။
Jesus Christ တယောက်ဟာ ဘာမှတော့ မဟုတ်ဘူး ၊ ငြိမ်းချမ်းရေး သမား တယောက်လို. ပြောရင် ရတယ် သူကို အသုံးချ ဘန်းပြပြီး ရိုမင် တွေကို ပုန်ကန်ကြတယ် ၊ JC ကို မများလှတဲ့ သူ အုတ်စုထဲက သူ.ကို ရောင်း စား လိုက်တယ်။ သူကဘာမှ မလုပ်ပေမဲ့ သူ.နာမည်နဲ့ မညိမ်သက်မှု တွေ ဆူပူမှူတွေ ဖြစ်ခဲ့တယ်၊ သူကိုယ်တိုင်ကလဲ သူသာသိ သူသာ တတ် အဖထက် သားတလကြီး ခဲ့တယ် နောက်ဆုံး သူကို ဘယ်သူမှ မကယ်နိုင်ဘူး သူ.ကို အစွဲပြု ပြီး ခရစ်ယန်ဘာသာ ပေါ်လာတယ်။ တနေ. မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဗူဓ္ဒဘာသာ ပျောက် ကွယ်ပြီး “စုကြည်ဘာသာ” ဆိုတာများ ပေါ်လာအုံး မလား မသိဘူး။
မစုကြည်ဟာ သမတဖြစ်ခြင်လို စစ်တပ်ကို ဖျားယောင်းနေတာတွေ ဘာ ကြောင်.လဲ ၊ ဖြစ် လာမဲ့ ဆိုးကျိုး တွေ ဆူပူမှုတွေ မငြိမ် သက်မှုတွေ ထိမ်း သိမ်းဘို. စစ်တပ် မလိုဘူး လို.ယူဆသလား ၊ ဒီနေ.တော ကန်တော့် ဆွမ်း ပါရှင် လို. ပြောလွှတ်လိုမရဘူးနောက် ၁၉၈၈ ခုထက် ဆိုးမယ် ၊ မစုကြည် ရိပ်ပါတ်မလည် သေးတာက ၊ ဒီမိုကရေစီ သတ်ကြီးရိုက်သွင်း လိုက်လို. Actions and opposite equal reactions ဆိုတာ ကို မလေ.လာမိခြင်းဘဲ ၊
ရိုင်းရိုင်းဘဲ ပြောမယ်နော် သီးခံ နားထောင်ပါ ဆိတ်မ တကောင်ကို အသာထိုမြင်းနဲ့သားစပ် တာ မဟန်တာကို ဆင်ဟိုင်း ကြီးနဲ. အတင်းပေးစားသလို ဖြစ် နေပြီ ဆိုတာ ရိတ်မိရဲလား ၊ အကောင်း ဖက်က ဘဲ ကြည့်ကြည့်. အဆိုး ဘက် က ဘဲ ကြည့်ကြည့် ကြည်ြ့ခင်သလိုကြည့် အရှိဟာ အရှိအတိုင်းဘဲ။ မြင်အောင်ကြည့်ဘို.ဘဲ လိုတယ် ။
ဖက်စစ် ငပုတွေ လို.ဒို.ခေါ်ခဲ့တဲ့ ဂျပန်နဲ့ မြန်မာဟာ ခေတ်အဆက်ဆက်က ချစ်ကြည် ရင်းနှီးကြစမြဲ ဘဲ၊ ၂ ဦး၂ ဖက် အဖိုးအဖြတ်နိုင်တဲ့ နားလည်မှု တွေ ရှိကြတယ် ။ တန်းတူ ရည်တူ ဆက်ဆံရေးတွေ ရှိကြတယ် တန်းတူရည်တူး လေးစားမှုတွေ ရှိကြတယ် ။ ဂျပန်တွေ ကို ဖက်စစ်ဝါဒီတွေ လို.သာခေါ် တယ် အင်္ဂလိပ် တွေလို မြန်မာတော်လှန်ရေး သမား တွေ ကို ခေါင်း ဖြတ်ပြီး အများသူငါ မြင်ရအောင် သင်္ခဏ်းစာယူရအောင် လပ်း ၄ ဂွမှာ ခေါင်းပြတ် တွေ ကို ပြထားတယ် လို. မကြားဘူးပါဘူး။
ေေ ပြောရပြန်အုံးမယ် ဆိုရင် ယောင်းမ တခါစီးလို. မှ အားမရသေး ယောင်းမ ပေါ်ကကို မဆင်း ခြင်ဘူး။ ဖင်အရသာ တွေနေပုံ ရတယ် ။ မုန်းလို. ချစ်လို.ပါ။